Asa 21 - Ny Baiboly
Asa toko 21
Ny diany nankany Jerosalema - Ny naminanian'i Agabosa izay hanjo azy - Ny nandraisan'ny mpino azy tany Jerosalema - Ny nisamborana azy tao an-tempoly - Ny nanafahana azy.
1Nony tafasaraka tamin'izy ireo izahay, dia niondrana an-tsambo, nizotra nankany Kosy, ka ny ampitso dia tonga tao Rody; ary niala tao indray dia tonga tany Patara. 2Tao dia nahita sambo hankany Fenisia izahay, ka niakatra tao dia lasa. 3Nony nahatsinjo an'i Sipra izahay, dia nandalo azy teo an-kavia, fa nanitsy any Siria, dia nitody tao Tira, fa tao no hametrahana ny entan'ny sambo. 4Nahita ny mpianatra izahay, ka nitoetra tao hafitoana, ary notsindrian'ny Fanahy Masina izy ireo, ka nilaza tamin'i Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. 5Nony tapitra ny hafitoana, dia niainga handeha izahay, ka nirohotra nanatitra anay hatrany ivelan'ny tanàna izy rehetra mbam-bady aman-janany. Nony mby teo amoron-dranomasina izahay, dia nandohalika nivavaka. 6Ka rahefa nifanao veloma, dia izahay moa niondrana an-tsambo, izy ireo kosa niverina nody. 7Niala tao Tira izahay, dia nankany Ptolemaisy izay niafaran'ny nandehananay an-tsambo, ary niarahaba ny rahalahy izahay, dia nitoetra teo amin'izy ireo indray andro.
8Nony ampitso dia nandeha izahay, ka tonga tany Sezarea; ary niditra tao an-tranon'i Filipo Evanjelista, anankiray tamin'izy fito lahy, ka nitoetra tao aminy. 9Nanana zanakavavy virjiny efara izay naminany izy. 10Nony nitoetra tao andro vitsivitsy izahay, dia nisy mpaminany anankiray atao hoe Agabosa tonga avy any Jodea. 11Vao tonga tao aminay izy, dia noraisiny ny fehin-kibon'i Paoly, namatorany ny tongotra aman-tànan'ny tenany, ka hoy izy hoe: Izao no lazain'ny Fanahy Masina: Hafatory ny Jody any Jerosalema toy izao ny lehilahy tompon'ity fehinkibo ity, dia hatolony eo tànan'ny jentily. 12Vao nandre izany izahay sy ny mpianatra tao, dia nihanta tamin'i Paoly mba tsy hiakatra any Jerosalema. 13Fa namaly izy ka nanao hoe: Nahoana no dia mitomany toy izao hianareo, ka tonga mahahontsa ny foko? Izaho izao dia vonona, tsy ny hafatotra ihany, fa na ny ho faty any Jerosalema aza mba ho voninahitry ny anaran'i Jesoa Tompo. 14Dia tsy laitra nahodina izy, ka nitsahatra terý izahay nanao hoe: Aoka ho tanteraka izay sitra-pon'ny Tompo.
15Nony afaka izany andro izany, nifehy entana izahay, dia niakatra ho any Jerosalema. 16Nisy mpianatra sasany avy any Sezarea niaraka taminay koa: nitondra mpianatra maintimolaly anankiray avy any Sipra izy ireo atao hoe Mnasòna: tao amin'io no nokasainay hitoerana.
17Nony tonga tany Jerosalema izahay, dia noraisin'ny rahalahy amin-kafaliana. 18Ny ampitso ihany dia niara-namangy an'i Jakoba izahay sy Paoly, ary tafavory teo ny Pretra rehetra. 19Nony efa niarahaba azy ireo Paoly, dia nolazainy tsirairay ny zavatra rehetra nampanaovin'Andriamanitra azy tamin'ny jentily.
20Nony nandre izany izy ireo, dia nankalaza an'Andriamanitra sy nanao taminy hoe: Hitanao, ry rahalahy, fa arivo maro ny Jody nino izao, nefa mbola fatra-pitana ny Lalàna izy rehetra. 21Ren'izy ireo fa hoe: hianao, hono, mampianatra ny Jody niely any amin'ny jentily hiala amin'ny Lalàn'i Moizy, sy tsy hamora ny zanany, ary tsy hanaraka ny fanaon-drazana. 22Ka ahoana àry no hatao? Fa handre anao tonga izao ny olona, ka tsy maintsy hivory daholo. 23Izao no aoka hataonao: misy lehilahy efatra nanao voady eto amintsika. 24Ento ireo, ka miaraha mandio tena aminy hianao, ary mandoava vola ho azy hanaratany ny lohany, dia ho fantatry ny vahoaka hoe tsy marina ny filazan'ny olona ny aminao, fa tsy mitsahatra ny mitandrina ny Lalàna hianao. 25Ary ny jentily izay nino dia efa nampitondranay taratasy, ka nodidianay hifady ny hena natolotra tamin'ny sampy, sy ny rà, ary ny biby nokendaina, mbamin'ny fijanganjangana.
26Dia nentin'i Paoly ireo lehilahy ireo, ka nony ampitso rahefa niara-nandio tena taminy izy, dia niditra tao an-tempoly, nilaza fa tapitra ny andro hahatanterahan'ny fandiovan-tena, dia tonga tao izy mandra-panatitra ny fanatitra ho an'ny isan-dahy. 27Nony efa ho tapitra ny hafitoana, dia nahita an'i Paoly tao an-tempoly ny Jody avy tany Asia, ka sady nampikorontana ny vahoaka rehetra no nisambotra azy tamim-piantsoana hoe: 28Vonjeo, ry lehilahy Israelita! fa ity eto ilay lehilahy mampianatra ny olona rehetra hatraiza hatraiza hanohitra ny firenentsika sy ny Lalàna ary ity fitoerana ity; hatramin'ny jentily avy aza no nampidiriny teto an-tempoly, nametaveta ity fitoerana masina ity. 29Fa hitan'izy ireo niaraka tamin'i Paoly tao an-tanàna i Trofima avy any Efezy, ka nataony ho nampidirina tao an-tempoly ihany.
30Dia nikorontana ny tanàna manontolo, nirohotra nivory ny vahoaka; ary nosamborina i Paoly, ka notaritiny ho any ivelan'ny tempoly, dia nakatony niaraka tamin'izay ny varavarana. 31Efa ndeha hovonoin'izy ireo ho faty i Paoly, kanjo nisy nilaza tamin'ny komandin'ny miaramila fa mikorontana Jerosalema manontolo. 32Ka naka miaramila sy kapiteny niaraka tamin'izay izy, dia nihazakazaka nankany amin'izy ireo. Nony nahita ny komandy sy ny miaramila izy ireo, vao nitsahatra tsy nikapoka an'i Paoly intsony. 33Dia nanatona ny komandy, ka nisambotra azy, sy nampamatotra azy tamin'ny rojo vy roa, ary nanontany hoe: Iza moa izy, ary inona no nataony? 34Samy nanana ny filazany be ihany anefa ny vahoaka, ka tsy nisy hamantarany izay marina noho ny tabataba, fa dia nasainy nentina ho any anaty rova izy. 35Nony tonga teo amin'ny ambaratonga, dia nobatain'ny miaramila i Paoly, noho ny vahoaka efa nifanesika loatra, 36fa vahoaka be no nanaraka sy niantsoantso hoe: Vonoy izy!
37Rahefa tafiditra tao anaty rova Paoly, dia nilaza tamin'ny komandy hoe: Mba mahazo milaza zavatra aminao va aho? Ary hoy izy: Moa mahay teny greka va hianao? 38Hay! tsy hianao akory ilay Ejipsiana nampikomy vahoaka farany teo, ka nitarika jiolahy efatra arivo tany an'efitra? 39Dia hoy Paoly taminy: Izaho dia Jody avy any Tarsy any Silisia, tompon-tany amin'ny tanàna tsy kely laza. Mihanta aminao aho, mba avelao kely hiteny amin'ny vahoaka aho. 40Dia neken'ny komandy izany, ka nitsangana teo amin'ny ambaratonga i Paoly, nanofa tànana ny vahoaka; ary rahefa nangina tsara ny olona, dia niteny tamin'ny teny hebrio izy nanao hoe: >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0535 seconds